ကလိုစေးထူး: ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်…
ကြည့်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး တော်တော်နဲ့ မကြည့်ဖြစ်သေးတဲ့၊ ရုံတင်နေတာ ရက်အတန်ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့၊ မြန်မာ ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ အသံတွေထွက်နေတဲ့ နာမည်ကျော် Rambo4ကားကို သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရမ်ဘိုကားကို သွားကြည့်ရင်းနဲ့လည်း ဒီနိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ရုံတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးက ရုံတွေ မတူခြားနားတာတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ဒီနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကိုပါ ဗဟုသုတအနေနဲ့ လေ့လာခွင့်လဲ ရခဲ့ပါတယ်။
ရမ်ဘိုဇာတ်ကားကို ကျနော်ကြည့်ချင်နေတဲ့ အချက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အဲဒီ ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်အိမ်တည်ဆောက်ပုံက ကျနော်တို့ နိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်နေလို့ပါ။ ဒီတော့ အဲဒီ ဇာတ်ကားအကြောင်း မပြောခင်မှာ သူတို့ဆီက ရုပ်ရှင်ရုံအကြောင်းကို တင်ဆက်ပါရစေ။
အဲဒါကတော့ ကျနော် သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ မြို့လေးက ရုပ်ရှင်ရုံပါ။
ဒီနိုင်ငံမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အသစ်တွေကို ရုံတင် ပြသရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ (ကျနော်က မြန်မာနိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ရုံမှာပဲ ရုပ်ရှင် ကြည့်ခဲ့ဖူးတာဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ရုံတွေနဲ့ပဲ ချိန်ထိုး နှိုင်းယှဉ် တင်ပြပါရစေ) က ရုပ်ရှင်ရုံတွေနဲ့ ကွာခြားတာကတော့ ရုပ်ရှင်ရုံတရုံမှာ ရုပ်ရှင် တကားတည်းကိုသာ ရုံတင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဥပမာ- ကျနော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာကတော့ သမ္မတရုံမှာ ဇာတ်ကားတကား၊ ရှေ့ဆောင်ရုံမှာ တခြား ဇာတ်ကားတကား၊ အဲဒီလို ရုံတင်ပေမယ့် ဒီနိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာကတော့ လတ်တလော ရုံတင်နေဆဲ ဇာတ်ကားအတော်များများကို တရုံတည်းမှာပဲ ရုံတင်ထားပါတယ်။ ပြသတဲ့ အချိန်တွေက သူ့ဇာတ်ကားနဲ့သူ အချိန်ခွဲထားတဲ့ အပြင် ကြီးမားကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံကြီးထဲမှာ သူ့အခန်းနဲ့သူ ဇာတ်ကားတွေကို ခွဲခြားပြသပါတယ်။ တကားချင်းစီ ပြသတဲ့ ခန်းမတွေကတော့ မြန်မာပြည်က ရုပ်ရှင်ရုံကြီးတွေထက်စာရင် ကျဉ်းပါတယ်။ ခန်းမ တခုကို လူ ၁၅၀ လောက်သာ ဆန့်ပါတယ်။ တခြားမြို့ကြီးတွေက ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာတော့ ဒီထက် ပိုကြီးတဲ့ ခန်းမတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ရှိကောင်း ရှိနိုင်မှာပါ။
ကျနော် ရောက်သွားတော့ အဲဒီ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ၁၆ ကားကို တပြိုင်နက် ရုံတင်ထားပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားတွေ အနက်ကမှ မိမိနှစ်သက်ရာ ဇာတ်ကား ဘယ်အချိန်မှာ ပြသမလဲဆိုတာကို ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံကို ကျနော်ရောက်သွားတော့ ညနေ လေးနာရီ ခွဲလုပါပြီ။ ရမ်ဘိုဇာတ်ကား ဘယ်အချိန်တွေ ပြမလဲလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ညနေ ၄း၅၅ မှာ တပွဲရှိတာကြောင့် အခန့်သင့် ဖြစ်သွားပါတယ်။
ရမ်ဘို ဇာတ်ကားကို ခန်းမအမှတ် (၆) မှာ ပြသပါမယ်…တဲ့။ ရုံဝင်ခကတော့ တယောက်ကို ၆ ဒေါ်လာခွဲပါ။ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဝယ်တော့ ခုံနံပါတ်မပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ကျနော် အကြောင်သားနဲ့ ဖင်တပြန် ခေါင်းတပြန် ကြည့်နေခဲ့မိပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ရုပ်ရှင်ရုံ ခန်းမထဲရောက်မှ သိရပါတယ်။ ခုံနေရာတွေကို နံပါတ်တွေနဲ့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ လူ ၁၅၀လောက်ဆန့်တဲ့ မကျဉ်းမကျယ် ခန်းမငယ်လေးမှာ ရောက်တာစောရင် စောသလို မိမိနှစ်သက်တဲ့ နေရာမှာ ၀င်ထိုင်ရုံပါပဲ။
ဘေးတဖက်တချက်စီမှာ သူ့အခန်းနဲ့သူ ဇာတ်ကားတွေ ရုံတင်ပြသနေတဲ့ အဲဒီ ရုပ်ရှင်ရုံကြီးကို ၀င်ဝင်ချင်း မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။ အဲဒီ ခန်းမ အကျယ်ကြီးထဲမှာ စားသောက်ဆိုင်ငယ်လေးတွေ၊ နားနေစရာ ဆိုဖာခုံတွေအပြင် ခန်းမရဲ့ အလယ်ခေါင်မှာ လူတယောက် စန္ဒယားထိုင်တီးနေပါတယ်။ သာယာငြိမ့်ညောင်းတဲ့ မတိုးမကျယ်သံစဉ်တွေက ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ လာရောက်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို တမျိုးတဖုံ အပန်းပြေစေပါတယ်။ စန္ဒယားတီးခတ်သူကို နှစ်နာရီခြားတခါလောက် လဲလှယ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လေယာဉ်မောင်၊ လေယာဉ်မယ်များလို ၀တ်စုံတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံဝန်ထမ်းတွေကလည်း မိမိသွားကြည့်ချင်တဲ့ ဇာတ်ကားရှိရာ ခန်းမကို ရှာမတွေ့သူတွေကို အကူအညီပေးကြပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ပြသဖို့ အချိန်မကျသေးခင် စောင့်နေရခိုက်မှာ ဆော့ကစားချင်တဲ့ ကလေးငယ်များအတွက်လဲ ကစားကွင်းအခန်း စီစဉ်ပေးထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ရမ်ဘိုကား ပရိသတ် မနည်းလှပါဘူး။ ခုံစေ့အောင် ရုံမပြည့်ပေမယ့် လူ ၁၅၀ ခန့်ဆန့်တဲ့ ခန်းမကို ၁၂၀ ၀န်းကျင်လောက် လာရောက် ကြည့်ရှုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတောင် ကျနော်နေတဲ့ မြို့ဆိုတာက တောမြို့သာသာ မြို့လေးပါ။ မြို့ကြီးက ရုံတွေမှာ ဒီထက် လူ ပိုများကောင်း များနိုင်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ရုပ်ရှင်ပြသခါနီး နိုင်ငံတော် သီချင်းလွှင့်ပြီး ရုပ်ရှင်လာကြည့်သူတွေကို မတ်တပ်အရပ်ခိုင်းတာ မရှိပါဘူး။ ထူးခြားတာ တခုအနေနဲ့ ဇာတ်ကားပြသခါနီးမှာ ဆဲလ်ဖုန်းတွေ ပိတ်ထားဖို့ စည်းကမ်းကို ဟာသနှောတဲ့ ဇာတ်လမ်းတို ပုံစံနဲ့ တင်ဆက်ပါတယ်။ ရွှေပြည်ကြီးက ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာလို နေကြာစေ့သံ၊ ကွာစေ့သံ တညံညံ မကြားရပေမယ့် ထောပတ်ပေါက်ပေါက်ဆုပ်နဲ့တော့ တလှိုင်လှိုင်ပါပဲ။ ရွှေပြည်ကြီးမှာတော့ ရုပ်ရှင်ပြီးသွားရင် နေကြာစေ့ခွံ၊ ကွာစေ့ခွံတွေ ပြန့်ကျဲနေပေမယ့် ဒီမှာကတော့ စားမကုန်တဲ့ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေ ဖွေးနေပါတယ်။ ပျင်းစရာ သိပ်ကောင်းတာ နောက်တခုကတော့ ရုပ်ရှင်မပြသမီမှာ ကြော်ငြာပေါင်းများစွာကို ပြသနေတာပါပဲ။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကြော်ငြာကတော့ မလွတ်ကင်းတာ ဒီကနေ့ ခေတ်ပါပဲ။
ချီတက်နေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေ၊ ပြည်သူကို ကန်ကျောက်နေတဲ့ နအဖ စစ်သား၊ ငိုကြွေးနေတဲ့ ကလေးငယ်၊ ပြေးလွှားနေကြရတဲ့ ပြည်သူတချို့၊ မီးလောင်နေတဲ့ ရွာတချို့ အစရှိတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ပုံရိပ်တချို့နဲ့ ဇာတ်ကားကို အစပြုပါတယ်။
ဇာတ်ကား ပြသချိန် တနာရီကျော်ခန့် ကြာပါတယ်။
ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများရဲ့ သဘောသဘာဝ အတိုင်းပဲ နောက်ဆုံးမှာတော့ လူကြမ်းဖြစ်သူ နအဖ ဗိုလ်မှူးကို ဇာတ်လိုက် ရမ်ဘိုက သုတ်သင်လိုက်တဲ့ အခန်းပါ။
ဒီဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပွဲဆူနေကြတာ တချို့နဲ့ ဟိုတစဒီတစ အသံထွက်နေတာ တချို့ ကြားရပါတယ်။ ကျနော် ဒီကားကို ကြည့်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ မြင်မိတဲ့ အမြင်ကတော့ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက ဇာတ်ဆောင် မင်းသား စတားလုံးဟာ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်က လူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ သူက ရုပ်ရှင်မင်းသား တယောက်အနေနဲ့ပဲ ဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးပါတယ်။ သူဖန်တီးတဲ့ ဇာတ်အိမ်မှာ လက်တွေ့ အပြင်လောကနဲ့ ကွာခြားတာတွေ ရှိသလို တူညီတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် တကယ့်လက်တွေ့မှာ နအဖ စစ်တပ်တွေ စစ်ဆင်ရေးဝင်တဲ့ ဒေသတွေအထိ ရောက်အောင် စစ်ကားတွေ မရောက်ပါဘူး။ စစ်ကားတွေ အလွန့်အလွန်ဆုံး ရောက်တာက ရှေ့တန်း စစ်ဆင်ရေး တပ်မဌာနချုပ်တွေ စခန်းထိုင်လေ့ရှိတဲ့၊ ရိက္ခာပုံလေ့ရှိတဲ့ စခန်းကုန်းလောက် အထိသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လယ်ကွက်ထဲကို နင်းမိုင်းတွေ ပစ်ချပြီးတော့ ရွာသားတွေကို ဖြတ်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေ သေနတ်နဲ့ ပစ်တဲ့ အခန်းဟာလဲ တကယ်တော့ ယုတ္တိတန်နေတာ အမှန်ပါပဲ။
တကယ့် လက်တွေ့မှာတော့ (ကျနော် ပေါ်တာလိုက်ခဲ့ဖူးတုန်းက တွေ့မြင်ခဲ့ရသလောက်) နအဖ စစ်သားတွေဟာ သူတို့ သွားရောက် တိုက်ခိုက်ရတဲ့ စစ်ဆင်ရေး နယ်မြေအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ (သူတို့အခေါ်) ရွာပုန်းတွေကို တွေ့တဲ့ အခါမှာ ရနိုင်သလောက် အချိန်နည်းနိုင်သမျှ နည်းစွာနဲ့ အဲဒီရွာတွေကို ဖျက်ဆီးပါတယ်။ `အစိတ်သားတောင် မချန်နဲ့´ လို့ မှာလိုက်တဲ့ သူတို့ရဲ့ အထက်အရာရှိ အမိန့်နဲ့အညီ မဲမဲမြင်ရာ အကုန်ပစ်ပါတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့ အခြေအနေမှာ နအဖ စစ်တပ်တွေ ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ရွာထဲမှာ လူတယောက်မှ မရှိကြတာများပါတယ်။ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျလို့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ တချို့လူတွေဟာလဲ `သူပုန်သတင်းပေးတွေ´ ဆိုပြီး မြင်တာနဲ့တင် အပစ်ခံရတာများပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေကို အကခိုင်းပြီးတော့ မူးယစ်နေတဲ့ စစ်သားတွေက ဆွဲလားရမ်းလား လုပ်တဲ့ အခန်းကလဲ ယုတ္တိတန်ပါတယ်။ တကယ့်တကယ် ရှေ့တန်းမှာ နအဖ စစ်တပ် အရာရှိတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို အဲဒီလောက်အထိ အောင်ပွဲခံဖို့ အခွင့်အရေး မပေးပါဘူး။ အလွန်ဆုံး သူတို့ လုပ်နိုင်တာတခုကတော့ ဖျက်ဆီးခံရလို့ လူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ အဲဒီ ရွာထဲက အိမ်တချို့က ရတတ်သမျှ အဖိုးတန် ပစ္စည်းတချို့ကို ရသမျှ အချိန်အတွင်းမှာ ရှာဖွေယူငင်၊ တွေ့သမျှ ကြက်၊၀က်၊ နွား အစရှိတဲ့ အကောင်ပလောင်တွေကို ရိက္ခာအလို့ငှာ ဖမ်းယူစားသောက်၊ ပြီးရင် အဲဒီရွာက မခွာမီမှာ တရွာလုံးက အိမ်တွေ၊ စပါးတင်းပုပ်တွေကို တခု မကျန် မီးရှို့ ဖျက်ဆီး…၊ အစရှိတာတွေကိုသာ လုပ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေက ကျနော့် မျက်မြင်ဖြစ်တဲ့ နအဖ စစ်တပ်ရဲ့ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်တာတွေပါ။ ရမ်ဘိုကားကတော့ ရုပ်ရှင်ဆိုတော့ ဇာတ်နာအောင်သဘော ကောင်မလေးတွေကို ဆွဲလားရမ်းလား လုပ်တဲ့ အခန်းကို ဇာတ်ရုပ်နဲ့အညီ ထည့်ချင်ဟန် တူပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းပဲ ရမ်ဘိုကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတချို့ ရှိတာတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရမ်ဘို ဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြင်ကြတဲ့ အမြင်အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် တွေးမိတာ တခုကတော့ အဲဒီဇာတ်ကားကို မှီတည်ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ဆိုတာကို ကမ္ဘာအနှံ့က လူသန်းပေါင်းများစွာ ပိုသိလာတယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့ အစပိုင်းမှာ ပြသတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ပုံရိပ်တွေကနေ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက မတရားမှုတွေကို လူတွေ ပိုသိလာလိမ့်မယ်။ သေချာတာကတော့ မြန်မာပြည် လက်ရှိ အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ သူတို့လက်အောက်ခံ ဗိုလ်မင်းများကတော့ အဲဒီကားကို မကြိုက်နိုင်ပါဘူး။ အရပ်သားပြည်သူတွေထဲကနေ ရမ်ဘိုကားအပေါ် မြင်ကြတဲ့ အမြင်တွေကတော့ ပုံစံတမျိုးစီ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ရုံထဲက ပြန်ထွက်လာတော့ အေးစက်စက်လေပြင်းနဲ့အတူ ညက မှောင်မိုက်နေပါပြီ။
ရုပ်ရှင်တော့ ရုပ်ရှင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်မျက်စိထဲက မထွက်တဲ့ ပုံရိပ်ကတော့ ဇာတ်ကားရဲ့ အစပိုင်းက ဖြစ်ရပ်မှန်ပုံရိပ်တွေပါပဲ။
Posted by ကလိုစေးထူး at 6:51 PM
ရွှေပြည်ကြီးက ရုပ်ရှင်ရံနဲ့ကွာခြားချက် ၊ အစ်ကို့ ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို လာဖတ်သွားပါတယ် ဇတ်ကားရဲ့ အစပိုင်းပုံရိပ်များဆိုတာ ကိုတော့ ကိုယ့်ပါသာပဲမှန်းပြီး မြင်ယောင်သွားပါတယ်ဗျာ......
Feb 11, 2008, 12:35:00 AM
oh, so u watched RAMBO4too..
thanks for sharing ur experiences and the review of it!
but sad to say, i have yet to catch it! ek :P
em,,btw the cinema at ur place looksalil too small,alil far away..
here in sg, cinemas are everywhere!
me boasting eh? :P hope u dun mind
Feb 11, 2008, 5:48:00 AM
I think, ur writing skill is very good. Very interesting and honest.So keep it up. And thanks for sharing ur experience.
Feb 11, 2008, 7:20:00 AM
Hey thanks for sharing your view about this movie!
this is really nice to learn something about our country!
I am Karen too & i have been to around KyautGyi state as well!
Feb 14, 2008, 12:47:00 PM
Hello Ko Klo Say Htoo
Thanks for posting about Rambo4and your own experience of what happened in part of our country. After watching Rambo 4, I wanted to find out from someone who can verify the extent of accuracy. Since movies are made to suit the creator’s purpose, it might have some exaggeration for the drama effect. Sharing personal experience is eye opener for people like me who have just heard about such violence.
I think facts speak louder than drama.
Oct 1, 2008, 9:04:00 AM